Ingaba ulilungu lefakhalthi okanye umfundi weYunivesithi onoluvo ofuna ukwabelana ngalo nehlabathi? Phambi kokuba udiz' amahlebo okanye ukwenza inkcazo-ntetho – thetha nathi ukuqinisekisa ukuba ilungelo lokuyilwa yingqondo (IP) lilawulwa kakuhle kwaye likhuselekile.
E-Innovus sineengcali nezibonelelo zokukunceda ekuthengiseni ngembono yakho ngempumelelo . Ngokufaka ifomu yokuchaza lowo uqambe umsebenzi, singakuxhasa kuyo yonke inkqubo, ukusukela ekuhloleni ukusebenza nokungasebenzi kwembono yakho, ukuya ekwenzeni uphando ngokwenzeka kwiimarike nasekuthatheni isigqibo ngelona nyathelo lifanelekileyo omawulithathe.
Ukufumana iphepha-mvume ngembono yakho nehlakani elifanelekileyo yenye yeendlela zokuqalisa ukurhweba.
Siza kuncedisa ekufumaneni ihlakani elililo kwaye sithethe nalo egameni lakho ngemimiselo nemiqathango nangemirhumo ekhutshwa ngenx' engaphambili, iintlawulo zomgam' ohanjiweyo kunye nezeeroyalthi. Klikha apha ukuze ufumane ingcaciso ethe vetshe.
Kambe, unako nokusungula ishishini elilihlumelo, elitsha. Sinezixhobo neenkonzo ezifanelekileyo zokukukhokela kuyo yonke inkqubo yokuqalisa ishishini elilelakho.
Ezi zixhobo ziquka:
· Inkxaso-mali eqingqiweyo;
· Ilebhu yokuyila amashishini;
· Uncedo lwezomthetho;
· Ukuqeqeshelwa izakhono zoshishino;
· Ukufumana abacebisi kwezoshishino
· Uncedo ngokubhala isicwangciso soshishino;
· Iingcebiso zoshishino;
· Uncedo lokuseka ishishini;
· Uncedo lokuqulunqa iqhinga leshishini;
· Ukufumana iindlela zokuqhagamshelana namanye amashishini;
· Ukufumana eminye imithombo yenkxaso-mali; kunye
· Neengxoxo zokubonisana ngokufumaneka kweempepha-mvume nezinye iimvumelwano.
Xa sele ukulungele ukuqalisa, siya kukunceda ekulungiseleleni ishishini lakho abatyali-mali abanokufumaneka. Nangayiphi na indlela, sijolise ekuphuculeni ukuthathelwa ingqalelo komqambi, afumane inkxaso yezoshishino nentsebenziswano kwaye ngaloo ndlela sibe senzela wena kwakunye neYunivesithi imali eyimbuyekezo ebonakalayo.
UMgaqo-nkqubo weLungelo lokuQwetywa yiNgqondo uzikhankanya zonke iinkcukacha, kuquka nolwabiwo lwengeniso esuka kushishino. Khumbula, kubaluleke gqitha ukuyiqonda i-IP! Ukukhusela imbono yakho kukunceda ekukunikeni umhlaba onguwo wokukhuphisana, ngenxa yoko, kwandise amandla onawo okushishina. Klikha apha ukuze ufunde ngakumbi ngelungelo lokuqwetywa yingqondo, kwaye uqiniseke ukuba uyawufunda uMgaqo-nkqubo weLungelo lokuQwetywa yiNgqondo osesikweni wethu. Ukuba uyathandabuza, thetha namagqwetha wethu we-IP akufutshane ukuze akucebise.
Ngako ke, kuqhubeka ntoni ngalaa mbono? Qhagamshelana ne-Innovus yaye masiqalise ngomsebenzi!